ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများ ဆီးခဏ ခဏသွားခြင်းကို ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်? – BurmeseHearts
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်အမျိုးသမီးများသည် တိုးလာသော ကိုယ်အလေးချိန်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း ကလေးက ဆီးအိမ်ကိုဖိ၍သော်လည်းကောင်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို ဆီးသွားခြင်း ၊ နာချေသောအခါ ၊ ပြေးလွှားသောအခါ နှင့် ရယ်မောသောအခါများတွင် ဆီးထွက်ခြင်းတို့လည်း ဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်း သိရသည်။
မပြင်းထန်သော တင်ပဆုံရိုး လေ့ကျင့်ခန်းပေးမည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်ပြီး ထိုဆီးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဥပမာ။ ။ လက်တန်းကိုင်ထားပြီး မတ်တပ်လျက်ဖြင့် ရှေ့နောက်လွှဲ လေ့ကျင့်ခန်းပြုခြင်း ၊ ဒူးမှနေ ခြေကွေးအဆန့် ပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများရဲ့ မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်းကို ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်?
BurmeseHearts	 May 3, 2020 0